प्रमाण पत्र लिएपछि ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाइदैन: परीक्षा नियन्त्रक शर्मा(हेर्नुस् अन्तर्वार्ता) — Bhaktapurpost.com
प्रमाण पत्र लिएपछि ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाइदैन: परीक्षा नियन्त्रक शर्मा(हेर्नुस् अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । गत बैशाखमा सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ २ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ र आंशिक तर्फ १ लाख १७ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सहभागी थिए । बोर्डले परीक्षा सकिएको ८१ औं दिनमा नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सधै समयमा नतिजा ननिकाल्ने भनेर आलोचना खेपिरहेको बोर्डले यसपटक १ महिना अघि नै नतिजा निकाल्न सफल भएको छ । त्यति मात्र होइन , सवै बिषयको एकैपटक परीक्षाफल प्रकाशन भएको पनि यो पहिलोपटक हो । प्रस्तुत छ, यसैको सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्मा संग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
समयमा परीक्षाफल प्रकाशन नगर्ने परीक्षा बोर्डले यसपटक कक्षा १२ को परीक्षाफल एक महिना अगाडि नै गर्यो । तपाईले के जादु गर्नु भयो ?
– यो जादु होइन । हामी सवैको कामप्रतिको लगाव र इमान्दारिताको प्रतिफल हो । हामीले उत्तर पुस्तिका परीक्षण देखि समपरीक्षण सम्म सवै काम प्यारालल्ली लिएर गयौ । एउटा काम सकेर अर्को शुरु गर्ने होइन कि सबैलाई संगसंगै लिएर जाँदा यो सम्भव भएको हो ।
पहिले पहिले दुई चरणमा नतिजा निकाल्दा पनि ढिलाई हुने गर्दथ्यो तर यसपटक सवैको एकैचोटी नतिजा निकाल्दा पनि चाडो हुनु त अचम्मै भएन र ?
-हो, तपाईले भने जस्तो हामीमा दुई चरणमा रिजल्ट गर्ने अभ्यास थियो । पहिले विज्ञान विषयको रिजल्ट गरेपछि त्यसको पनि केहि महिनापछि हामी अरु विषयको रिजल्ट गर्थ्याै । त्यसो गर्दा पनि भ्याई नभ्याई नै हुन्थ्यो । यसपटक सवैको एकैपटक गर्दा पनि चाडै गर्न सकियो । यसलाई अचम्म भन्दा पनि असल शुरुवात भन्दा उत्तम होला ।
एकैपटक नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोच कहाँबाट आयो ?
– परीक्षा नियन्त्रकको रुपमा यो मेरो पहिलो परीक्षा भएपनि डेपुटी भएर मैले लामो समय काम गरेको अनुभव मसंग थियो । त्यतिबेलाको अनुभवबाट मलाइ यो काम गर्ने आँट आयो । यसमा बोर्डका पदाधिकारीज्युहरुको सुझाव र मेरा सहकर्मी मित्रहरुको सहयोगले पनि काम गर्यो ।
तपाई परीक्षा नियन्त्रक भएपछि यो राम्रो शुरुवात भयो । यसको निरन्तरता रहला वा यो नयाँ नियन्त्रकको क्षणिक काम देखाउने कोशिश मात्र हो ?
– अव बोर्डले परीक्षाफल प्रकाशनमा यसरी नै तदारुकताका साथ् काम गर्ने कुरा म परीक्षा नियन्त्रकको नाताले विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अध्यक्षज्यु तथा बोर्डका पदाधिकारीज्युहरुको मार्गनिर्देशन र हामी कर्मचारीहरुको निरन्तरको खटाइमा तालमेल मिलेको अवस्था छ । हामीहरु एक साता सम्म रातको ११ बजे सम्म पनि बसेर परीक्षाफल प्रकाशनको सम्पूर्ण तयारी गरेका हौ । गर्नुपर्छ भनेर अठोट लिएपछि गर्न सकिदोरहेछ भनेर हामी उत्साहित बनेको अवस्था पनि हो यो । म मात्र होइन अव जो परीक्षा नियन्त्रक आए पनि परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई हुदैन किनभने कामले ट्रयाक लिइसकेको अवस्था छ ।
यसपटकको पास आउट ग्रेडीङमा आधारीत प्रमाणपत्र पाउने पहिलो ब्याच पनि हो । बजारमा कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्ने आशा गर्नु भएको छ ?
-हो , हामीलाई यसले औधि उत्साहित बनाएको छ । हिजोका दिनमा अंकमा आधारीत प्रमाणपत्र पाइरहेका विद्यार्थीहरुले यसपटक ग्रेड सीट पाउने भएका छन् । मुल्यांकन प्रणालीमा हामीले कहिँ कतै गल्ती गरेका छैनौ । संसारभर हाम्रा विद्यार्थीहरुको एकेडेमिक जाँच गर्ने औजारको रुपमा यसले भूमीका खेल्नेछ । एसइइमा अभ्यस्त भैसकेका हुनाले विद्यार्थी र अभिभावक पनि यसप्रति अनभिज्ञ नभएको कारण यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने विस्वास छ ।
आफूले प्राप्त गरेको ग्रेड प्रति चित्त नबुझे के गर्न सकिन्छ ?
-यस्ता विद्यार्थीहरुले सीधै सानोठिमीस्थित परीक्षा बोर्डमा वा सम्पर्क कार्यालयहरुमा प्रति विषय रु ५ सय तिरेर भदौ १ गते भित्र पुनर्योगकोलागि आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । अर्को कुरा एक विषयमा अनुपस्थित, D+ वा सो भन्दा कम ल्याउनेले यसै वर्षमा माैका (पुरक) परीक्षा दिएर ग्रेड वृद्धि गर्न पाउछन् । धेरै विषयमा ग्रेड वृद्धि गर्नु पर्ने भए अर्को वर्ष कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिइसके पछि ग्रेड वृद्धि गर्न मन लाग्यो भने कस्तो व्यवस्था छ ?
– त्यो सम्भव छैन । ग्रेड वृद्धि गर्नु पर्ने बिषयमा ग्रेड वृद्धि नगरी सामान्यतया हामी प्रमाणपत्र दिदैनौ । यदि कसैले मलाइ ग्रेड वृद्धि आवस्यक छैन भनेर लिन्छ भने त्यस्तो विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउदैन । यदि भएमा उनीहरुको परीक्षा स्वत: रद्द हुनेछ ।
हेर्नुस् कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि (पुरक) परीक्षा सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
नतिजा हेर्न तलको लिंकमा क्लिक् गर्नुहोस् ।